Indlela yokwenza i-Multimedia Presentation kwisiKlasi saseNgesi
Iilwimi Izibonelelo zootitshala
Indlela yokwenza i-Multimedia Presentation kwisiKlasi sakho sesiNgesi
by UMarko Bankovic
Westend61 / Getty Izithombe
Ukuze wenze inkcazo njengeprojekthi yeklasini, kufuneka ube nekhompyutha kunye ne-PowerPoint okanye isofthiwe yesingeniso efanayo. I-PPPCD okanye isofthiwe efanayo ifakwe - le software ekhululekile, evumela ukuba wenze i-CD enegunya kunye neMiboniso ye-PowerPoint; I-CD-RW idivaysi kunye ne-software evulekileyo yeCD; I-CD-RW ngamnye umfundi.
Isinyathelo soku-1: Fumana ngokuqhelekileyo ngeSofthiwe
Zama ukwenza intetho ngokwakho. Kuhlala kusisilumko ukuqala ukwenza into ofuna ukufundisa abanye. Qhaqhelana nesofthiwe.
Inyathelo 2: Yenza i-Questionnaire
Yenza i-questionnaire kubafundi bakho. Bangaphi babo baneekhomputha ekhaya? ngaba bayathanda ukusebenza kwiikhomputha? njl. Uza kuceba imisebenzi ngokusekelwe kule data (umzekelo, awukwazi ukulindela ukuba abafundi bakho baya kubonisa ukunikezelwa kwabazali babo kwaye ngoko ke babuyiselwe isigama xa abaninzi bengenakho iikhomputha ekhaya - kwimeko apho, kufuneka ukwenza iintetho ezingaphezulu zoluntu; njl.)
Inyathelo 3: Khuthaza abafundi
Ukukhuthaza abafundi kwaye bazise ingcamango yokwenza intetho.
Isinyathelo 4: Umzekelo wokuPhathwa
Yenza umzekelo kwenkcazo yakho kwiklasi. Qala encinci. Akuyi kuqala njengeprojekthi eya kumnceda wonke umntu. Kwanele ukuba wonke umfundi akhiphe inkcazo encinci ngolwazi oluyisiseko ngaye (igama, idilesi, intsapho ...).
Inyathelo lesi-5: Qinisekisa ukuba abafundi bayaziThuthuzela ngokwenza iNkcazo
Hlaziya isicatshulwa 4. Ngaba ngaba abafundi babakhuthaza? Ngaba ichitha ixesha? Ngaba unokuhlangabezana nemisebenzi emikhulu? Ukuba ungaziva ukhuselekile - nqama. Kungcono ukumisa ngoku ngaphezu kwexesha elizayo (abafundi abayi kuvakalelwa kukuba abaphumelelanga ukwenza inkcazo yeklasini - baya kuziva ukuphumelela komntu ngenxa yokuba bakha iintetho ezincinane zabo).
Inyathelo 6: Hlanganisa izinto ezininzi
Njalo xa ufundisa into entsha uzama ukuyisebenzisa ukunikezela. Thatha imizuzu emihlanu eklasini kwaye ufundise abafundi ukuba babhale izivakalisi ezimbalwa zabo ukuze bafake kwisingeniso. Makubekho izivakalisi malunga nento oye wayithetha ngayo ngeli xesha. Nceda abafundi bakho bachaze iingcamango zabo neemvakalelo zabo.
Inyathelo lesi-7: Ukongeza okuqukethwe kwiNkcazo
Hlanganisa iklasi kwiklasi yekhompyutheni apho abafundi baya kwengeza umxholo abaye baqokelela kwiincwadi zabo kwinqanaba elidlulileyo. Nceda abafundi abanesofthiwe kunye noyilo kunye nomxholo. Hlanganisa zonke iintetho zobuqu kwiinkcazo enye yeklasi. Yongeza umxholo owongezelelweyo (ukufunda, ukubhala, usebenza ...). Sebenzisa izitatimende ezintle kunye nezakho (njengokuba Sithanda uku ... bhala endaweni yezinto ezibhalwayo nje, isichazi sethu esikhundleni sesichazamazwi). Yivume njengethulo lokugunyaza (usebenzisa i-PPPCD) kwi-CD-RW kwaye unike abafundi ukuba bathathe ekhaya. Ubafundise indlela yokusebenzisa le ntetho ekhaya.
Phinda amanyathelo 6 no-7 maxesha amaninzi njengoko kuyimfuneko (de kube sekupheleni konyaka wesikolo). Ukulungisa nayiphina impazamo kwaye ngoku unayo i-Final Version.
Isinyathelo 8: Ukunika i-Presentation
Yenza inxaxheba yoluntu yomsebenzi. Tshela abafundi ukuba bameme abazali, abahlobo njl. Vumela abafundi bakuncede uququzelele eso siganeko. Eli nqanaba lokugqibela libaluleke kakhulu kuba liya kubanika abafundi iimvakalelo zokuphumelela eziza kubagcina zikhuthaze kude kube ngumnyaka wesikolo esilandelayo.
Isibhengezo sesibini esincinci Isifundo
Isiqalo esingaqaliyo IsiNgesi - I-Today yeLwimi 'yokuba'
Ukuqonda Ukufunda: 'Twas Ubusuku Ngaphambi Krisimesi
Ukufundisa isiNgesi kwelinye ilizwe
Ukwandisa Ukusetyenziswa kweLwimi kweLwimi
I-Brain Gym® Exercises
Indlela yokukhetha iNcwadi yezifundo kunye nezinye izinto zokufundela
Indlela Yokufundisa Ixesha Elidlulileyo
Kutheni na amanzi aSebenza kwiNdawo yonke?
Yintoni i-Byzantine Architecture? Jonga kwiiCawa zamaKrestu zokuqala
ULouisa May Alcott Iincwadi - Abancinci Abancinci nangaphandle
Inkcubeko yamaSilamsi ixesha kunye neNcazelo
Imibuzo ene-ADO-DB / 7
Iintlobo - Iisetyithi ezizalisayo
Iinyaniso Ngeentaka kunye neRishi Yomtshato
Izwe eliLungileyo loMculo weeMvumi zeeMculo
I-Classroom Etiquette kubafundi
I-Carcharodontosaurus, "i-Great White Shark" i-Dinosaur
I-Faux Amis Eqala Ngo-E
Indlela yokukhusela ukuCoca kwiiNxibelelwano zombane
I-North Central College Admissions
I-Cheyney University yasePennsylvania Admissions
Ukwahlukana Phakathi kwe-UK, Great Britain, neNgilani
Iimfuneko eziyimfuneko kwiNcalulo yokuCaluleka ekhoyo